အမျိုးသားလွှတ်တော် ဥပဒေကြမ်းကော်မတီက သပိတ်မှောက်ကျောင်းသူ ကျောင်းသားတွေ တောင်းဆိုထားတဲ့ အမျိုးသားပညာရေး ဥပဒေကိုပြင်ဆင်တဲ့ ဥပဒေမူကြမ်းကို အမျိုးသားလွှတ်တော်မှာ ဒီနေ့ တင်သွင်းခဲ့ပါတယ်။
ဒီဥပဒေကြမ်းတင်သွင်းလိုက်တာကို ဥပဒေကြမ်းကော်မတီ ဥက္ကဌ ဦးခင်မောင်ရီက ဖတ်ကြားလိုက်တာပါ။
"ဒီမိုကရေစီပညာရေးလှုပ်ရှားမှု ဦးဆောင်ကော်မတီဝင် ကျောင်းသားကိုယ်စားလှယ်များ၏ လေးပွင့် ဆိုင် အစည်းအဝေးထံ တင်ပြတဲ့တောင်းဆိုထားသည့်အချက် ၁၁ ချက် ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေကြမ်းပါအပိုဒ် အပိုဒ်ခွဲတစ်ခုခြင်းအပေါ် ကျောင်းသားကိုယ်စားလှယ်များ၏ တင်ပြချက်များသည် အဓိက အခြေခံလို့ စဉ်းစားကာ အချက်ပေါင်း ၈၁ ချက်ရှိပါတယ် အားလုံးက၊ တိုက်ရိုက်လက်ခံသင့်သည့် တိုင်တန်းချက်က ၃၈ ချက်ရှိပါတယ်၊ မူရင်းအနှစ်ဥပဒေကြီးကို အနှစ်သာရမပျက်စေပဲနဲ့ ဥပဒေ အရေးထုတ်နဲ့အညီ ပြုပြင်ရေးသားသင့်တဲ့ ပြဌါန်းချက်များနဲ့ စကားရပ်ရေးသားအစားထိုး ပြင်ဆင်ရေး သားချက် ၂၄ ချက်ရှိပါတယ်"
အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေကို ပြင်ဆင်နိုင်ဖို့အတွက် အမျိုးသားလွှတ်တော် ဥပဒေကြမ်းကော်မတီဟာ သပိတ်မှောက်ကျောင်းသားတွေရဲ့ ဒီမိုကရေစီပညာရေး လှုပ်ရှားမှုဦးဆောင်ကော်မတီ၊ ပညာရေးပြုပြင်ပြောင်း လဲမှု နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကွန်ရက် NNER တို့အပြင် နိုိုင်ငံရေးပါတီတွေ၊ ကျောင်းသားသပိတ်ကို ထောက်ခံသူ မိဘပြည်သူတွေနဲ့ ကြားနာပွဲတွေကျင်းပခဲ့ပါတယ်။
အခု ဥပဒေကြမ်းမှာ ပညာရေးလွတ်လပ်ခွင့်ရှိရေး၊ ဆရာ ဆရာမများ သမဂ္ဂဖွဲ့စည်းခွင့်ရရေး၊ အခမဲ့ပညာသင် ကြားရေးကို အခြေခံပညာအဆင့်ကနေ ခွင့်ပြုပေးဖို့တွေလည်း ပါရှိပါတယ်။
ဒါ့အပြင် တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်ကို အမှတ်စာရင်းနဲ့မသွားတော့ပဲ သက်ဆိုင်ရာတက္ကသိုလ်တွေမှာ လွတ်လွတ် လပ်လပ် လျှောက်ထားခွင့်ရှိပြီး အဲ့ဒီတက္ကသိုလ်တွေရဲ့ ဘုတ်အဖွဲ့ သို့မဟုတ် စိစစ်ရေးအဖွဲ့ကနေ ဆုံးဖြတ်ပေးမှာ ဖြစ်တယ်လို့ ပါရှိပါတယ်။
ပညာရေးအသုံးစရိတ်ကို အစိုးရဘတ်ဂျက်ရဲ့ ၂၀% အထက်အထိ အသုံးပြုခွင့်ပေးဖို့ကိုလည်း မူကြမ်းမှာ ထည့်သွင်းထားပါတယ်။
အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေကို ပြင်ဆင်တဲ့ဥပဒေကြမ်းကို ဆွေးနွေးမယ့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေအနေနဲ့ လာမယ့် တနင်္လာနေ့နောက်ဆုံးထားပြီး အမည်စာရင်းတင်သွင်းရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပညာရေးဥပဒေပြင်ဆင်ရေး ညှိနှိုင်းဖြေရှင်းဖို့ ကြားနာပွဲမှာ ပါတီတွေဆွေးနွေး
လွှတ်တော်ကြားနာပွဲ ဗကသအဖွဲ့ ဆက်လက်သပိတ်မှောက်
ပညာရေး ဥပဒေဆိုင်ရာ ကြားနာပွဲပါတီ ခေါင်းဆောင် များ ဆွေးနွေး
ပညာရေးဥပဒေ လေးပွင့် ဆိုင် ဆွေးနွေးပွဲ မပြီးပြတ်သေး
မျက်ကန်း မျိုးချစ် ကတော့ ဖေကံကောင်းတို့မောင်ကာလု တို့လို လျှာအရိုး မရှိတိုင်း ကြံဖန် ငြင်းနေမှာပဲ။ ကြာရင် မြောင်းထဲရောက်သွားမှပါ။ စင်္ကာပူ ဟာ Multi racial country ဆိုပြီး ဘယ်သူမှ ဘာသာ ၃ မျိုး မသင်ရပါဘူး။ မလုပ်တတ် ရင် အဲဒီလူတွေ ပထွေး တော်လိုက်။
ပြည်နယ်တစ်ခု တိုင်းရင်းသားဘာသာစကား တစ်မျိုးတင်ပေးယုံနဲ့ ကျန်တဲ့တိုင်းရင်းသားတေက ကျေနပ်မယ်များထင်သလား? တိုင်းရင်းသားဘာသာစကားနဲ့သင်ပေးပါပြီတဲ့ ၊ တိုင်းရင်းသားကလေးက ဘာသာသုံးမျိုးသင်ရမယ်။ မြန်မာကလေးက နှစ်ဘာသာပဲသင်ရမယ်။
ဘယ်ခလေးက ပိုခက်ခဲမလဲ။ ဘယ်ခလေးက စာပိုတတ်မလဲ? ဥဏှောက်ရှိတဲ့လူတိုင်းသိနိုင်တယ်။။ အမြင်မကျဉ်းကြနဲ့။ ကိုယ်ပဲနစ်နာမယ်။
Mar 22, 2015 10:47 AM
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ဦးနု သူတို့မတိုင်မီ သူတို့နောက် နိုင်ငံခေါင်းဆောင် နိုင်ငံရေးသမားတွေဟာ ကျောင်းသား သမဂ္ဂ ကနေဆင်းသက်လာကြတာ။ နိုင်ငံမှာ ပညာရေ အမြင့်မားဆုံး နေရာ ကနေ ထွက်ပေါ် လာတဲ့ ပညာတတ် နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေ ထွက်ပေါ်လာမှ တိုင်းပြည် ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်မှာ။ အဲဒါလို ထွက်ပေါ်လာရင် သူတို့ နေရာ ပျောက် မှာ စိုးလို့အာဏာရှင်တွေ က အပြတ်ရှင်းတာ။ DSA ကျောင်းထွက်တွေ က သူတို့ ပဲ အာဏာရ ခြင်တာ။ ဗကသ တကသ ကို မုန်းတီးနေတဲ့သူတွေ။
Mar 21, 2015 08:23 PM
ကျောင်းသားတွေ တင်တာ မှားလားမှန်လား အချိန်က စကားပြောမှာပဲ။ အဲဒီ အခါ အချိန်မရွး ပြန်ပြင်ရင် ရတာပဲ။ နော်ဝေ ဘုရင် ဘာပြေသွားလဲ။ သူတို့နိုင်ငံမှာ ခြေ/ဥ တောင် အကြိမ် ၂၀၀ လောက် ပြင်ရတယ်။ လွန်ခဲ့ တဲ့ အနှစ် ၅၀/၆၀ မပြင်ပဲ ထားတောင်ထားရဲ ခဲ့သေးတာပဲ။
Mar 21, 2015 08:16 PM
ကျောင်းသားတွေနဲ့ NNERတွေရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကို သဘောတူခွင့်ပြုလိုက်ရင်တော့ အနာဂတ်အမျိုးသားပညာရေး ရင်လေးစရာပဲ။ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေအနေနဲ့ ကိုယ့်အသိတရာနဲ့ကိုယ် စဉ်းစားတင်ပြဆုံးဖြတ်သင့်ပါတယ်။
Mar 20, 2015 11:06 PM